သူတစ်ပါးကို အပြစ်တင်တော့မယ်ဆိုရင်. . . – Healthy Life Journal
သူတစ်ပါးကို အပြစ်တင်တော့မယ်ဆိုရင်. . .
တစ်ခါတုန်းက အဘိုးအိုဦးဘဟာ သူ့အိမ်နီးချင်းမောင်ထူးက သူခိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ကောလာဟလသတင်း လွှင့်လိုက်ပါတယ်။ သူ့စကားကြောင့် မောင်ထူးအဖမ်းခံလိုက်ရတော့တယ်။ ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ မောင်ထူးမှာ အပြစ်မရှိကြောင်း သက်သေပြနိုင်သွားခဲ့တယ်။ ဦးဘက သူ့ကို မှားယွင်းစွာ စွပ်စွဲ ပြောဆိုပါတယ်ဆိုတာ တရားရုံးမှာ မောင်ထူး ကျိန်ဆိုခဲ့တယ်။
တရားရုံးမှာ ဦးဘက “ ဒီစကားတွေက မှတ်ချက်သက်သက်ပဲလေ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်ပါဘူး” လို့ လျှောက်လဲခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ တရားသူကြီးက အမှုကို အမိန့်မချခင် ဦးဘကို ပြောပြခဲ့တယ်။
“ မောင်ထူးအကြောင်း စာရွက်တစ်ရွက်ထဲ ချရေးပါ။ ပြီးရင် စာရွက်ကို အပိုင်းပိုင်း စုတ်ဖြဲပြီး အိမ် ပြန်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက် စက္ကူအပိုင်းအစတွေ ပစ်ချလိုက်ပါ။ မနက်ဖြန်မှာ အမိန့်ကြားနာဖို့ ပြန်လာခဲ့ပါ”
နောက်တစ်နေ့မှာ တရားသူကြီးက အဘိုးအိုကို ပြောတယ်။
“ အမိန့်မချခင် အပြင်ထွက်ပြီး မနေ့က လွှင့်ပစ်ခဲ့တဲ့ စက္ကူအပိုင်းအစတွေကိုအကုန်ကောက်ခဲ့”
“ ဒါကို မလုပ်နိုင်ဘူး။ လေနဲ့အတူ လွင့်ကုန်ပြီ။ ဘယ်မှာရှာရမလဲ မသိတော့ဘူး”
“ ဒီလိုပဲ ခင်ဗျားပြောတဲ့ မှတ်ချက်တွေက စက္ကူစတွေလို ပြန့်နှံ့ကုန်ပြီ။ ပြန်အဖတ်ဆယ်လို့မရအောင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရိုးသားမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်”
သူ့အမှားကို နားလည်ပြီး ခွင့်လွှတ်မှုကို ဦးဘ တောင်းခံပါတော့တယ်။
မှတ်ချက်။ ။ အချက်အလက်အမှန် မသိဘဲနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မပြောပါနဲ့။ မသေချာဘဲနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို မဖျက်ဆီးပါနဲ့။